NZIRA YEKUVHURA RAR MAFAIRA MUKATI WINDOWS 10 (2021) - NYORO
Nzira yekuvhura RAR Mafaira mukati Windows 10
Archive mafaira mafomati senge .zip, .rar, .7z, .tar, nezvimwewo zvinobatsira kutakurika uye kuchengetedza zvinangwa. Akawanda mafaera anogona kusungwa uye kumanikidzwa pamwe chete mufaira rimwe chete iro rinotorawo diki diki nzvimbo yekuchengetedza uye inodzivirira kunetseka kwekurodha pasi kana kutumira mafaera ega. Kunyangwe, asiri ese mafomati ekuchengetedza mafaira ane rutsigiro rwenyika paWindows OS. Ese maWindows shanduro dzakaburitswa post-1998 rutsigiro .zip mafaera, kureva, imwe haidi yechitatu-bato kunyorera uye inogona kubaya-kaviri pa .zip faira kuti uone zvirimo uye woiburitsa kunze, asi zvakafanana hachisi chokwadi mamwe mafomati ekuchengetedza.
Vashandisi veWindows havagone kuvhura zvakananga mafaira .rar uye zvinoda rubatsiro rwechitatu-bato. Neraki, iyo internet yakazara nemvura nezvikumbiro zvinobatsira kuvhura uye kuburitsa zviri mukati me .rar nemamwe mafaera ekuchengetedza. Ipo iyo yemahara uye yakavhurika-sosi 7-zip inosarudzwa nevazhinji vashandisi, dzimwe sarudzo dzakakurumbira senge WinZip , WinRAR , PeaZip , nezvimwewo zvinoshandiswa nevakawanda. Mamwe mawebhusaiti anotendera vashandisi kuburitsa mafaera avo .rar online uye kurodha zvirimo kana kushandura .rar mafaera ku .zip mafaera, mhando yefaira inotsigirwa neWindows OS. Munyaya ino, isu tinokupa iwe kufamba kwekushandisa uku uye nekudaro, kukubatsira iwe kuvhura .rar mafaera pakombuta yako yeWindows.
Nzira yekuvhura RAR Mafaira mukati Windows 10?
1. Enderera mberi nekushanyira kurodha peji yechero ipi yambotaurwa .rar kuvhura maturusi. Mazhinji acho ane maviri akapatsanurwa vhezheni anowanikwa makumi matatu nemasere masystem uye makumi matanhatu masisitimu masisitimu. Dhawunirodha iyo .exe faira inokodzera yako system kuvaka (Faira Explorer> Dzvanya-kurudyi pane Iyi PC uye sarudza Zvivakwa kuti usimbise yako system mhando) Tichave tichishandisa 7-zip yeichi chidzidzo asi maitiro ekushandisa mamwe .rar maturusi akaenzana kana kushoma zvakafanana.
Ongorora: Kazhinji vashandisi vanogona tora & isa iyo yemahara vhezheni yechero ipi yenyaya yepamusoro yezvishandiso zvekuchengetedza, nepo vashandisi vemberi vanodawo kushandisa maturusi ekumanikidza mafaera vanofanirwa kuenda kuburikidza neye yavo rondedzero, enzanisa compression ratios, nezvimwe usati watenga nekuisa iyo yakabhadharwa vhezheni.
2. Kana uchinge watora pasi chishandiso che .exe faira, tinya kaviri pairi kuvhura iyo yekuisa wizard uye uteedzere pa - screen mirayiridzo kuiisa. Ita shuwa kuti iwe unoisa iyo application kune yayo default nzvimbo.
3. Zvino zvatave kuisa software inodiwa, tinogona kufamba tichivhura iyo .rar faira. Tsvaga iyo .rar faira, tora-kurudyi pairi uye sarudza Vhura ne> 7-Zip kubva pane inotevera mamiriro menyu. Kana iwe ukawana 7-zip muVhura nemenyu, tinya pa Sarudza Imwe purogiramu ichiteverwa Mamwe maApplication uye Tarisa imwe app paPC . Enda kune C: Chirongwa Mafaera 7-Zip , sarudza 7zFM.exe uye tinya paVhura.
4. Iwindo rezip-7 rinoratidza zvirimo mufaira re .rar uye nemamwe metadata ichavhurwa. Dzvanya pa Bvisa (Nekutadza mafaera ese anotorwa. Kana iwe uchingoda kuburitsa imwe kana mafaera maviri, sarudza yekutanga uye wobva wadzvanya pane Bvisa), uye muhwindo rinotevera, gadzira nzira yekubvisa.
5. Nzvimbo yekumisikidza yekutora yakaiswa zvakafanana nenzvimbo iripo yeiyo .rar faira. Chinja iyo kana uchida uye tinya pa Zvakanaka kutanga maitiro ekubvisa.
Ongorora: Mamwe mafaera e .rar akachengetedzwa ne password, uye iwe unozokumbirwa kuti uiise kuitira kuti uzarure iyo faira kana kuburitsa zvirimo.
Nguva yekubvisa inoenderana nenhamba yemafaira, saizi yavo, uyezve pane ako maPC specs kune imwe nhanho. Kubvisa faira re .rar kunogona kutora chero kupi kubva pamasekonzi mashoma kusvika maminetsi akati wandei. Zvakare, iwe haufanire kuvhura maRAR mafaera mu7-zip nguva inotevera unoteedzera, nekudzvanya kaviri pa .rar faira inozozvivhura otomatiki mukushandisa kwakakodzera!
Tinovimba chinyorwa ichi chakabatsira uye iwe wakakwanisa vhura maRAR mafaera muWindows 10 pasina chero nyaya. Kana iwe uchiri uine chero mibvunzo kana mazano ipapo inzwa wakasununguka kusvika kunze uchishandisa chikamu chemashoko.
maitiro ekuchimbidza google chrome windows 10
microsoft Edge isingashande mushure mekuvandudza
windows 10 hapana default gedhi
maitiro ekugadzirisa realtek madhiraivha
windows 10 internet yekubatanidza inodonha zvisina kujairika
mutyairi nvidia achirovera mahwindo 10 2018